लेटरिंगमा कर्निंग र ट्र्याकिंग कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? | क्रिएटिव अनलाइन
लेटरिंगमा कर्निंग र ट्र्याकिंग कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
स्पेसिing अक्षरांकनको एक मूलभूत कारक हो र यसले अन्तिम नतिजालाई डिजाइनको रूपमा झै प्रभावित गर्दछ। अक्षरहरूको बीचमा पर्याप्त स्पेसि सीमित गर्नु जुन हाम्रो कामको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ। धेरै सानो स्पेसको साथ अक्षरहरूको सेटले राम्रो पढ्न रोक्छ किनकि हाम्रो आँखा बिल्कुल फरक हुँदैन जहाँ एउटा चरित्र समाप्त हुन्छ र अर्को सुरु हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले, अत्यधिक दूरीले चराहरूलाई लिंक गर्न निकै गाह्रो बनाउँछ र हामी एक शब्द कहाँ सुरु हुन्छ र अर्को अन्त्य हुन्छ भनेर ठ्याक्कै थाहा छैन।
यस प्रश्न भित्र दुई एlic्ग्लाइज्महरू छन् जुन हामीलाई जान्नको लागि आवश्यक छ: ट्र्याकिंग र कर्निंग। तर ती वास्तवमा के हुन् र ती सबैको प्रभावहरू के हुन्?
El ट्र्याकिङ गद्य रूपमा स्पेनीमा अनुवाद गर्न सकिन्छ र दुई स्थानहरूमा व्यवस्थित रूपमा थपिएको ठाउँ हो। यो कोष को सौंदर्यशास्त्र र हाम्रो परियोजना मा छ कि उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ। हाम्रो वर्णमालाले केहि वर्णहरू समावेश गर्दछ, जब एक अर्कासँग मिल्दा समस्याहरू वा अप्टिकल दोषहरू उत्पन्न गर्दछ र यो सामान्य ट्र्याकि withको साथ समाधान गर्न सकिदैन र यो यस्तो प्रकारको परिस्थितिमा हो कि कर्निंगले ठूलो महत्त्व प्राप्त गर्दछ।
ट्र्याकि withको साथ के हुन्छ यसको विपरीत, कर्निंग हाम्रो भाषामा यसको कुनै खास अनुवाद छैन। हामी यसलाई मानको रूपमा बुझ्न सक्छौं स्पेसिंग जुन दुई क्यारेक्टर जोडीहरूको बीचमा लागू हुन्छ अप्टिकल दोषहरूको लागि कुनै तरिकामा क्षतिपूर्ति दिन र यस तरीकाबाट यो देखिदैन कि केही अक्षरहरू अन्य भन्दा बढी एकजुट छन्।
सत्य यो हो कि त्यहाँ कुनै सटीक र सार्वभौमिक सूत्र छैन जसले हामीलाई बताउँदछ कि सही स्पेसिंग सबै प्रकारका रचनाहरूमा के हुन्छ। सबै कुरा हाम्रो शैली मा निर्भर गर्दछ र साथै हाम्रो typographic संवेदनशीलता मा। केहि डिजाइनरहरूले केहि कन्डेन्स्ड रचनाहरू मन पराउँछन्, जबकि अरूले चाहान्छन् कि चराहरूले थोरै सास फेर्छन्। अझै, त्यहाँ धेरै डिजाइनरहरू र विद्वानहरू छन् जसले स्पेसिंग समस्यासँग सामना गर्न विधिहरू स्थापना गर्न प्रयास गरेका छन्। उदाहरणको लागि, १ 1986 XNUMX मा वाल्टर ट्रेसीले आफ्नो पुस्तक लेटर्स अफ क्रेडिटमा सही स्पेसिंगको लागि आधार तयार गर्ने प्रयास गरे। यो समायोजन विधि कर्निंग र ट्र्याकिंगको साथ काम सुरू गर्न राम्रो तरिका हुन सक्छ, यद्यपि यसले हाम्रो परियोजनाको बारेमा हामीले गरेको निर्णय र दर्शनमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » लेटरिंगमा कर्निंग र ट्र्याकिंग कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
२०१5को वर्डप्रेसका लागि Best उत्तम थिमहरू